Multi-Vitamin: July 2012
တရုတ်ပြည်က အကောင်ပလောင်တွေကို ပေါက်ကရလုပ်စားတာလောက်တော့ အာဖရိက က ပျင်းသေးတယ်။ ကြွက်တွေကို လုပ်စားလိုက်တာများ BBQ ကျနေတာပဲ ။ အမွှေးတောင် နှုတ်ရဲ့လားမသိ :D
ကဲ....ဘယ်သူစားရဲလဲ....ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မရှိဘူးသေးတဲ့ အစားအစာလေးပေါ့
ကြွက် ရေလုံပြုတ်လေးလား......ကြွက်ကင် လေးလား.......
Posted by 925 at 11:190comments
(1)The most selfish one-letter world is' I ' . Avoid it.
အက္ခရာတစ်လုံးတည်းရှိတဲ့ တကိုယ်ကောင်းအဆန်ဆုံးစကားလုံးကတော့ 'ငါ' ပါ။ အဲဒါကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
(2)The most satisfying two-letter world is' We ' . Use it.
အက္ခရာ နှစ်လုံးပါတဲ့ စိတ်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံး စကားလုံးကတော့ `ငါတို့´ ပါ။အဲဒါကို အသုံးပြုပါ။
(3)The most poisonous three-letter world is' Ego ' . Kill it.
(4)The most used four-letter world is' Love ' . Value it.
အက္ခရာလေးလုံးပါတဲ့ လူသုံးအများဆုံးစကားလုံးကတော့ `ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါ။ အဲဒါကို တန်ဖိုးထားပါ။
(5)The most pleasing five-letter world is' Smile '. Keep it.
အက္ခရာငါးလုံးပါတဲ့ ကြည်နူးစရာအကောင်းဆုံးစကားလုံးကတော့ `အပြုံး´ ပါ။အဲဒါကို ဆောင်ထားပါ တဲ့။
(6)The fastest spreading six-letter world is' Rumor '. Ignore it.
အက္ခရာခြောက်လုံးပါပြီး အလျင်မြန်ဆုံးပျံ့နှံ့လွယ်တဲ့စကားလုံးကတော့ `ကောလဟာလ´ ပါ။ အဲဒါကို လျစ်လျှူရှုပါ။
(7)The hardest working seven-letter world is' Success '. Achieve it.
အက္ခရာခုနှစ်လုံးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး အပြင်းထန်ဆုံး ကြိုးစားရယူရတဲ့ စကားလုံးကတော့ ' အောင်မြင်မှု' ပါ။ အဲဒါကို အရယူပါ။
(8)The most troublesome eight-letter world is ' Jealousy '. Distance it.
`မနာလိုဝန်တိုမှု´ ပါ။ အဲဒါကို ဝေးဝေးရှောင်ပါ။
(9)The most powerful nine-letter world is ' Knowledge '. Acquire it.
`အသိပညာဗဟုသုတ´ ပါ။ အဲဒါကို ကြိုးစားရယူပါ။
(10)The most essential ten-letter world is ' Confidence '. Build it
အက္ခရာဆယ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးစကားလုံးကတော့`ယုံကြည်မှု´ ပါ။
Posted by 925 at 23:20 1 comments
Posted by 925 at 22:390comments
ဆေးထိုးအပ်ကြောက်သူများအတွက် အပ်မပါသောဆေးထိုးပြွန်ကို သုတေသီများမှ တီထွင်လိုက်ပြီ
အပ်မပါသော ဆေးထိုးပြွန်အတွက် အကျိုးရှိစေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိမှုတစ်မျိုးကို မက်ဆာချူးဆက် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (MIT) မှ သုတေသီိများက ဖန်တီးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဂျက်ပြွန်ဟုခေါ်ရမည့် ဆေးထိုးပြွန်တွင် သေးငယ်ပြီး အားကောင်းသော သံလိုက်ငယ်နှင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို သုံးထားပြီးဆေးဝါးများကို အသံ၏အမြန်နှုန်းနီးပါးဖြင့် ထိုးသွင်းနိုင်သည်။
လျှပ်စစ်စီးကြောင်း၏ အမြန်နှုန်းမှာ နှစ်ဆင့်ရှိပြီး ပထမအဆင့်တွင် အရေပြားကို ဖောက်ဝင်ပြီး လိုအပ်သည့် နေရာအထိရောက်ရန် အမြန်နှုန်းဖြင့် ဝင်သွားမည်ဖြစ်ကာ ဒုတိယအဆင့်နေဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်က စုပ်ယူဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့ ဆေးကို တဖြည်းဖြည်းဖြန့်ဝေပေးရာတွင် ပထမအဆင့်လောက် မမြန်ပဲ အရှိန်နှုန်းနှေးကွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဆေးဝင်သွားမည့်အပေါက်အရွယ်ပမာဏမှာ ခြင်ကိုက်ရာတွင်ဖြစ်သောအပေါက်အငယ်အရွယ်မျှသာဖြစ်မည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ယင်းသို့သောဆေးထိုးပြွန်အချို့ရှိနေပြီး ဖြစ်သော်လည်းယင်းတို့ထက် အားသာသည့်အချက်မှာ ထိုးသွင်းသည့်အမြန်နှုန်းသည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း
နှစ်ဆင့်ခွဲနိုင်သောကြောင့်ထိုးသွင်းလိုက်သည့် ဆေးရည်ကို ကောင်းမွန်စွာ ပြန့်နှံ့စေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်များကို ထိုဆေးထိုးအပ်အသုံးပြုပြီး ဆေးထိုမည်ဆိုပါက လူကြီးတွင်ထိုးသည့် အမြန်နှုန်းအတိုင်မဟုတ်ပဲ လျှော့ချ၍ရနိုင်မည်ဟုလည်းဆိုပါသည်။အနာဂတ်တွင် အပ်မပါသော
ဆေးထိုးပြွန်များသည် မနာကျင်စေရန်အတွက်မဟုတ်တော့ပဲ ဆေးမှုန့်ကို အရည်အနေအထားပြောင်းပြီး အရေပြားအတွင်းဝင်ရောက်စေခြင်းကဲ့သို့အားသာချက်များပါရှိလာရန်
ယင်းအားသာချက်ကြောင့် ထိုးဆေးအရည်များကဲ့သို့ပျက်စီးလွယ်ခြင်း၊ အအေးခံထားရခြင်းမရှိသည့်
ဆေးမှုန့်များကို အလွယ်တကူယူဆောင်သုံးစွဲနိုင်ခြင်းဖြင့် လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်နိုင်သည့်
Posted by 925 at 08:41 1 comments
လူသားတို့၏ မျက်ရည်များဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော ဆားများကို အင်္ဂလန်တွင် ရောင်းချနေ
လန်ဒန်မြို့တွင် လူသား၏မျက်ရည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ဆားပွင့်များကို ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြသွားပါတယ်။
အဆိုပါမျက်ရည်ဆားများကို လန်ဒန်မြို့ ဟော့စ်တန်လမ်းပေါ်ရှိမွန်းစတား ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချိရေးက ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဆားပွင့်များတွင်ပါဝင်သော မျက်ရည်များအား စိတ်ခံစားမှုနှင့်အလိုက် စုစည်းထားကာ ပမာဏကွဲပြားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဆားပွင့်များမှာ မျက်ရည်ပမာဏ အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး လူသား၏ လတ်ဆတ်သောမျက်ရည်များကို နည်းပညာများအသုံးပြုကာ စုစည်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းဖော်ပြသွားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဆားမျက်ရည် ထုတ်လုပ်ရေးက မျက်ရည်များအားပုံဆောင်ခဲပြုလုပ်သည့်ခွက်ထဲသို့ထည့်ကာ အနည်းငယ်ဆူနေသော ရေနွေးထဲတွင်စိမ်ပြီး ဆားမျက်ရည် ပုံဆောင်ခဲကို ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဖော်ပြထားသည့်အတွက် ယင်းဆားပုံဆောင်ခဲမှာ လူသား၏ မျက်ရည်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဟုတ် မဟုတ်ကို လတ်တလောတွင် အငြင်းပွားနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြသွားခဲ့သည်။
Ref: Techno Newspaper
Posted by 925 at 02:090comments
Posted by 925 at 15:362comments